6 Sirood Oo Kaa Caawinaya Inaad Noqoto Lamaan Wanaagsan - Aayaha
6 Sirood Oo Kaa Caawinaya Inaad Noqoto Lamaan Wanaagsan
Illaa aad iska dhigto lamaan wanaagsan, waadku dhibtooneysaa inaad hesho guur wanaagsan.
Waa kuwaan 6 sirood oo kaa caawin doona inaad noqoto lamaan wanaagsan.
Wax bixi adigoo aanan wax filaneyn
Had iyo jeer inaad lamaankaaga kaliya wax ka filato waxay xiriirka ka dhigaysaa mid qaraar oo aan dhadhan lahayn. Waa qalad inaad ku fekerto inay tahay masuuliyad lamaankaaga saran in wax walbo oo guurka ku saabsan uu bixiyo. Lamaan wanaagsan waa tan garata inay muhiim tahay inay wax bixiso iyadoo aanan bedelkooda filaneyn.
Had iyo jeer waqti u sameey lamaankaaga
Waa inaad had iyo jeer waqti usameysaa lamaankaaga dhib malahan si walbo aad u mashquul utahay. Waa inaad mudnaanta siisaa lamaankaaga/lamaantaada.
Marnaba ha aflagaadeyn lamaankaaga/lamaantaada
Ma jirto sabab wanaagsan ood u aflagaadeysid lamaankaaga. Had iyo jeer xasuusnoow tan hadii aad dooneysid in noqoto xaas wanaagsan. Qof kasta xaq ayuu uleeyahay inuu caroodo mararka qaar balse xaq uma lihid inaad aflagaadeysid lamaankaaga/lamaantaada si kasta oo aad u careysantahay.
Baro tanaasulka xitaa hadaad saxantahay
Mararka qaar waa muhiim inaad iscelisid oo aad utaansushid nabadda darteed xittaa hadaad saxantahay oo lagaa gardaranyahay. Intabadan dagaalka guurka waa laga hortagi karaa haddii lamaanayaasha ay fahmaan tan. Mararka qaarkood dhib malahan qofka saxan iyo kan qaldan, dhibka ayaa waxa uu yahay dhammeynta muranka si loo badbaadiyo xiriirka.
Ha filan lamaan dhan walba u wanaagsan
Ma jiro qof dhan kasta u wanaagsan oo aad adiga kamid tahay sidaa darteed waa qalad inaad filantid lamaan dhan walba u wanaagsan.lamaankaaga wuu sameynayaa qalad mararka qaar waana qalad inaad kuxukuntid maxaa yeelay adiga ayaa sidoo kale qalad gala mararka qaar.
Iskuguma wici kartid lamaan wanaagsan haddii aad tahay qiyaanooleey. Qiyaanada ay lamaantaada kugu sameyso raali gelin malahan. Waxaa lagaa rabaa inaad daacad unoqotid naftaada iyo lamaankaaga si daacadnimo iyo Sharaf leh aad ugu noolaataan.
Afar qaabood oo inaad jeceshahay aad ku tusi karto wiil ama gabar uu xiriir kaala dhexeeyo